ပီလောပီနံကြိတ်စက်,လတ်ဆတ်သောပီလောပီနံကြိတ်ခွဲရန်အတွက်ယူကကာ grater စက်
ပီလောပီနံသည်အာဖရိကတွင်အဓိကဖြန့်ဖြူးပေးသောစားသုံးနိုင်သောအမ်မီယမ်၏အရေးပါသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ ပီလောပီနံကြိတ်စက်သည်ငါးများကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန် နှိပ်၍ paste လုပ်ရန်။, ပီလောပီနံသည်ပီလောပီနံအမျိုးမျိုးမှထုတ်ကုန်များကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်,ပီလောပီနံမုန့်ညက်,ပီလောပီနံဓာတ်, ပီလောပီနံဖျော်ရည်, ပီလောပီနံကြိတ်စက်မှပီလောပီနံပြား. ယူကကာ grater စက်တွင်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းပါးသည်,မြင့်မားသောစွမ်းရည်,ကောင်းသောအမှုန်,လွယ်ကူသောတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု.
ပီလောပီနံကိုကြိတ်ခွဲရာတွင်အသုံးပြုသည့်ပီလောပီနံကြိတ်စက်,အာလူး, ကန်စွန်းဥ,yucca. အဆိုပါ yucca grater စက်အားဖြင့်ကြိတ်ပြီးနောက် ,ပီလောပီနံအစားအစာကိုအမျိုးမျိုးသောအစားအစာများပြုလုပ်နိုင်သည် ,ထိုကဲ့သို့သော fufu အဖြစ်,garri etc.D ရိုးရာသံတူအမျိုးအစားပီလောပီနံစက်နှင့်ကွဲပြားသည်,yucca grater စက်၏ဤမျိုးသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကြိတ်ခွဲခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ ချောမွေ့သောပီလောပီနံ paste.to သည် fufu နှင့် garri.it ၏နိုင်ဂျီးရီးယားတွင်အသုံးဝင်သောပီလောပီနံထုတ်လုပ်သောစက်ဖြစ်သည်။,သွားရန်,ဘီနင်,နိုင်ဂျာ,ဘူရွန်ဒီ,မာလာဝီစသည်တို့.
yucca grater စက်၏အားသာချက်
1.ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူ Yacca grater စက်, တာ ၀ န်သက်တမ်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုသေချာစေရန်နိုင်ငံခြားကိစ္စများကို bearings သို့မ ၀ င်ရောက်အောင်တားဆီးနိုင်သည်.
2.မြင့်မားသောလည်ပတ်မြန်နှုန်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကြိတ်ခွဲခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု, ပီလောပီနံစေ့ကိုလည်းအာလူးအတွက်သင့်တော်သည်, ကန်စွန်းဥ ,ကြာပန်း .
3.ဒီပီလောပီနံကြိတ်စက်ကိုယိုစိမ့်မှုမရှိစေတဲ့ Resonable design, လျော့နည်းကျန်ကြွင်း, ယိုစိမ့်မှု slurry ဖြစ်ရပ်ဆန်း.
4.ဝယ်သူသည်လျှပ်စစ်မော်တာကိုရွေးချယ်နိုင်သည်,ဒီဇယ်အင်ဂျင် ,yuacca grater စက်ကိုမောင်းဖို့ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်.
ပီလောပီနံကြိတ်စက်၏နည်းပညာဆိုင်ရာ parameters များကို